Ngaphakathi kolwandle lwehlabathi | Iindaba Zokuhamba
Iilwandle zangaphakathi zeHlabathi
UMonica sanchez | | ngokubanzi, Izaziso
Iplanethi yoMhlaba ayinayo kuphela imihlaba yendalo emangalisayo, enje ngehlathi laseBorneo okanye iilwandle ezikweleenjiko zaseMelika, kodwa ikwanazo neendawo ezininzi. elwandle apho kukho iintlobo ngeentlobo zezilwanyana kwaye apho, ukongeza, ungonwabela ukubona iidolophu eziselunxwemeni lwazo.
Ngaba ungathanda ukuba sikhe sikhenkethe ezinye iilwandle ezisemhlabeni? Okwangoku, awuzukulungiselela imithwalo yakho, nangona uya kufuna ukuyibona kamva kwisikhephe.
1 ulwandle lasemediterranean
2 Ulwandle iAegean
4 ULwandle oluMnyama
5 Ulwandle lweAral
6 Ulwandle lwaseJapan
8 ULwandle lweCaribbean
9 Ulwandle lwaseGreenland
10 Ulwandle lwaseBeaufort
Masiqale ukhenketho lwethu ngokuya kubona Ulwandle lasemediterranean. Olu lwandle »luncinci» londliwa ngamanzi e-Atlantic, agqitha kwi-Strait of Gibraltar. Imalunga nezigidi ezi-2,5 km2 kunye ne-3.860km ubude. Kamva, ukusuka kwiCaribbean, ulwandle lwesibini ngobukhulu emhlabeni. Amanzi ayo ahlamba emazantsi eYurophu, entshona yeAsia nasemantla eAfrika.
Siyaqhubeka nohambo lwethu oluya ngase Ulwandle iAegean, ephakathi kweGrisi neTurkey. Inommandla omalunga ne-180.000km2, kwaye ubude be-600km ukusuka emantla ukuya emazantsi, kunye ne-400km ukusuka empuma ukuya entshona. Kuyo uyakufumana Iziqithi zaseTurkey iBozcaada kunye neGökçceada, kunye namaGrike aseCrete okanye eKárpatos. Igama livela kukumkani waseAthene u-Aegean, owathi, ekholelwa ukuba unyana wakhe u-Theseus wasweleka etyiwa yi-Minotaur, waziphosa elwandle. Ibali elilusizi ngolwandle oluhle njengeAegean.
Ngaphandle kokuya kude kakhulu, ngoku siza Ulwandle iMarmaraEbekwe phakathi koLwandle iAegean kunye noLwandle oluMnyama, ngakumbi apho iStraits saseDardanelles kunye neBosphorus silele khona. Kwimeko apho ubungazi, sikuxelela ukuba olu lwandle alukho ngaphantsi kwe-11.350km2 ubude. Ukuhamba ngolwandle sinokwazi ezinye iziqithi ezinje nge IPrince Islands kunye neeIqithi zeMarmara.
Awunakuphuthelwa ULwandle oluMnyama. Ime phakathi empuma mpuma Yurophu kunye neAsia Minor, idityaniswe empuma noLwandle iAegean. Inommandla we-436.000km2 kunye nomthamo we-547.000km. Kolu lwandle kukho amazwe aseBulgaria, eGeorgia, eRomania, eRashiya, eTurkey naseUkraine. Iinkcubeko ezahlukeneyo, izithethe ezahlukileyo, iindawo ezininzi ezintle zokuzibona nokuzonwabisa
El Ulwandle lweAral Yayelinye lamachibi amakhulu emhlabeni, egubungela ummandla we-68.000km2. Ngelo xesha, yomile ngokuqinisekileyo. Le ntlekele ichazwe njengenye yezona zakha zambi kwimbali yakutshanje. Ukuyibona, kuya kufuneka uye kumbindi weAsia, ngakumbi kumazwe aseKazakhstan naseUzbekistan.
Lixesha lokuba uhambe uye kwi Ulwandle lwaseJapan, namhlanje kuthathelwa ingqalelo njengolwandle olunempikiswano enkulu ngenxa yenkohlakalo yokuzingelwa ngokwesiko kwamahlengesi kwiindawo zonxweme zolu lwandle ezifana neTaiji. Eli siko lakudala, namhlanje elichaswayo ngabakhuseli bezilwanyana, libhiyozelwa minyaka le nge-1 kaSeptemba, ngelo xesha ulwandle ludyojwe bubomvu ligazi lamahlengesi abuleweyo.
Ngoku siya kwelinye isiphelo sehlabathi, ukuze sazi i Ulwandle lwaseGrau, ePeru. IGrau ligama elaziwa ngalo indawo yePacific eya kwindawo eselunxwemeni yelizwe. Olu lwandle luphuma kwiBoca de Capones luye ngaseConcordia, ke ngoko aluhlambi ngaphantsi Iikhilomitha ezingama-3.079 zamanxweme.
El ULwandle lweCaribbean lolunye lolwandle lwetropiki esinokulufumana emhlabeni. Ime kwimpuma ye-Central America nakumantla o Mzantsi Melika. Ngommandla we-2.763.800km2, amanzi ayo ahlamba inkitha yamazwe, anjengeCuba, iCosta Rica, iBarbados okanye iPuerto Rico. Ukuba ufuna ukonwabela iilwandle ezinamakristali kunye nemozulu epholileyo, ngokuqinisekileyo uya kuba nexesha elimnandi.
Lixesha lokuba uhambe kancinci (okanye kakhulu cold). Siya ku Ulwandle lwaseGreenland, imi kumantla oLwandlekazi lweAtlantic. Ime phakathi konxweme olusempuma lweGreenland, iZiqithi zeSvalbard, isiqithi saseJan Mayen kunye neIceland. Iquka malunga ne-1.205.000km2. Ngaphandle kwamaqondo obushushu asezantsi anokurekhodwa apha (ngezantsi -10ºC), Uya kufumana izilwanyana ezininzi ezihlala emanzini ayo, ezinje ngamahlengesi, amatywina, iminenga kunye neentaka zaselwandles.
Olunye ulwandle olupholileyo, i Ulwandle lwaseBeaufort. Ime phakathi kweAlaska kunye neNorthwest Territories kunye neYukon, eyokugqibela eseCanada. Inommandla we-450.000km2, kwaye inegama layo kwigrographer yaseIreland uSir Francis Beaufort (1774-1857). Kulapho i Isiqithi seBhanki, owathiywa imbeko kaSir Joseph Banks (1768-1771), isazi sendalo, isazinzulu ngezityalo kunye nomhloli wamazwe owayekhokela iRoyal Society ngo-1819 nowayengumlingane kaJames Cook kuhambo lwakhe lokuqala.
Kwaye nantsi uhambo lwethu oluthile luphela. Loluphi ulwandle oluthandileyo? Yintoni enye engaphantsi?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba Zokuhamba » ngokubanzi » Iilwandle zangaphakathi zeHlabathi
Ewe bandinike nje njengemizekelo emi-4 okanye emi-5 kwaye ayikokubonelela ngeendaba kwaye uninzi lwezaziso kakuhle andilithandi eli phepha konke konke ke dalith colordo Ndikhangela ulwandle hayi iintengiso zamaphephandaba… ..nicole
Idolophu yaseThames, isiqwenga saseNgilani sakudala eChina
Amanxweme ahamba ze eDenmark